Ntuziaka ngwa ngwa gị maka ịhazi ụzọ ọpụpụ na Georgia n'oge ọrịa na -efe efe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọbịa ọbịa » Ntuziaka ngwa ngwa gị maka ịhazi ụzọ ọpụpụ na Georgia n'oge ọrịa na -efe efe
Kedu ihe kacha tufuo gị gbasara ụwa tupu oria ojoo? Jụọ onye ọ bụla na -anụ ọkụ n'obi njem a ajụjụ a, ha ga -aga n'ihu na -atụ uche na ọ na -ewute ha ịgagharị obodo ọhụrụ, nri, na omenala. Ọ bụ ezie na ọrịa COVID-19 emetụtala akụkụ dị iche iche nke ndụ anyị, mmetụta ya na atụmatụ njem dị oke egwu ileghara anya.
Georgia, nke nwere ọmarịcha ihe owuwu ụlọ ya, okirikiri okpuru ala ya, na akụkọ ihe mere eme dị iche iche, na -enye ọtụtụ ndị afọ ojuju n'ịnọ n'ụlọ na -enye ebe nchekwa akụ.
Steeti ndịda ọwụwa anyanwụ nwere ngwakọta mara mma nke ọmarịcha obodo nta, obodo na -adịghị mma, na obodo mepere emepe.
Ọ nwere ihe echere maka onye njem ọ bụla.
Mana ọ bụrụ na ị na -eme atụmatụ njem na Georgia n'oge ọrịa na -efe efe, ị ga -eche ọtụtụ ajụjụ na nsogbu ihu.
Ọ dị mma ịga Georgia ugbu a? Enwere m ike ịga Georgia ọbụlagodi na agbanyeghị m ọgwụ mgbochi oke? Ọ dị m mkpa iyi mkpuchi ihu n'ihu ọha? Achọrọ m iburu akụkọ nyocha RT-PCR na-adịghị mma iji banye steeti?
Ọ bụ naanị ntakịrị ajụjụ ga -ejupụta n'uche gị ozugbo ị na -eche maka ịgagharị Georgia. N'ime blọgụ a, anyị edepụtala ozi niile ịchọrọ ịnụ ụtọ ezumike juru eju na Georgia. Ka anyị leba anya.
Kedu ọnọdụ COVID-19 dị ugbu a na Georgia?
Onu ogugu oria COVID-19 ekwenyela na Georgia na-arị elu kemgbe July 5, 2021, mgbe steeti hụrụ nke kacha ala n'afọ. Steeti ekwupụtala ngụkọta nke ọrịa ọhụrụ 7,400 kwa ụbọchị n'izu gara aga. Nke ahụ bụ mmụba 25x ma e jiri ya tụnyere ọnụọgụ sitere n'izu asaa gara aga.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrịa 5,000 COVID-19 na-anata ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ Georgia dị iche iche. Ụlọ ọrụ ahụike dị na steeti ahụ na -arụ ọrụ na 90% nke ikike ICU ha.
Nke ahụ ọ pụtara na ị kwesịrị izere ime njem na Georgia kpamkpam?
Ọ dị mma, ọ nweghị ụzọ dị mfe ịza ajụjụ a. Ọ bụ ezi echiche izere ụdị njem ọ bụla na-adịghị mkpa n'oge ọrịa. Mana enwere ụzọ iji hụ na nchekwa na ọdịmma gị, ọbụlagodi na ị họrọ ịga Georgia ugbu a.
Kedu maka mmachibido njem na Georgia?
Dị ka edere ede a, Georgia na -emeghe ndị njem si n'ime US Steeti ahụ na -anabatakwa ndị njem mba ofesi, na -egbochi mba ole na ole, dịka India, Iran, South Africa, na China. Ọzọkwa, enweghị ihe ọ bụla dị mkpa maka ndị njem ịpụ iche mgbe ha rutere Georgia.
Ndị njem mba ofesi ka ga-enye akụkọ RT-PCR na-adịghị mma (ọ bụghị okenye karịa awa 72) mgbe ha rutere. Enweghị ụkpụrụ dị otú ahụ maka ndị njem ụlọ.
Imirikiti ebe ndị njem nlegharị anya, ụlọ nri, ụlọ mmanya, na ụlọ ọrụ azụmahịa ndị ọzọ na-adịghị mkpa mepere emepe. Mana ha na-arụ ọrụ n'ike belatara, ọ nwere ike bute usoro nchekwa COVID-19 ọzọ. N'otu aka ahụ, ụgbọ njem ọha na -arụ ọrụ n'obere ikike n'ọtụtụ obodo.
Kedu ka esi eme atụmatụ njem gị na Georgia?
Iji malite, ị ga-echeta na mmachi njem metụtara ọrịa na-agbanwe agbanwe mgbe niile. Dị njikere na inyocha ntuziaka ndị kachasị ọhụrụ sitere na isi mmalite nwere ntụkwasị obi, dịka CDC webụsaịtị. Ọzọkwa, lelee akụkọ mpaghara ka ị lelee ọnọdụ ọrịa COVID-19.
Ndị a bụ ndụmọdụ ole na ole ga -enyere gị aka ime njem gị kacha mma na Georgia:
Gaa na Ebe Ebe Amachaghị Ama
Chọghị onye ga -agwa gị na ụzọ kachasị mma iji dobe akwụkwọ akụkọ coronavirus bụ ịzere ebe ndị mmadụ juru. Ọtụtụ ndị njem nleta na -eleta Georgia ga -aga obodo ndị ama ama, dịka Athens na Atlanta.
Mana Georgia nwere ọtụtụ ihe ha ga -enye. Ọ bụrụ na ị na -achọ ebe nlegharị anya dị jụụ na nke zoro ezo na Georgia, tụlee ịga leta obodo ndị na -adịghị mma, dị ka Snellville na Dahlonega. Ebe ndị a na -eme ka ị hụperetụ ọmarịcha ịma mma nke Georgia ka ị na -ahapụ gị ka ị nwee ezumike ezumike gị nwayọ nwayọ.
I nwekwara ike mee atụmatụ njem gaa Savannah mara mma ma ọ bụ agwaetiti ọla edo mara mma. Echefula ịlele mgbochi njem mpaghara tupu ịhazi njem gị.
Jọjia na -enwe ihu igwe na -ekpo ọkụ nke na -enwe ogologo oge ọkọchị na oge oyi. Steeti na -enwekarị mmiri ozuzo na égbè eluigwe. Ọzọkwa, ihu igwe na -adịgasị iche dabere na ala.
Ọ bụ ya mere na ọ dị mma mgbe niile ịlele ndenye ihu igwe na Snellville, Dahlonega, Savannah, na ebe ndị ọzọ ịchọrọ ịga na Georgia. Ọ ga-agba mbọ hụ na ị na-enwe ezumike ezumike juputara na enweghị nchekasị n'agbanyeghị ọrịa ọjọọ.
Chee echiche banyere nchekwa gị
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ọrụ na Georgia nwere ike ha agaghị enwe iwu masking iwu, jide n'aka na ị na -eyi nkpuchi mgbe ọ bụla ị gara ebe ndị njem nlegharị anya. Echefula ịgbaso ịdị ọcha aka yana usoro ndọpụ uche mmadụ. Ọ bụrụ na ị na -apụ ịga rie nri, jide n'aka na ị jụọ ụlọ oriri na ọ aboutụ aboutụ maka usoro nchekwa ha na -eji ugbu a.
Ma ị na-achọ mgbapụ izu otu izu ma ọ bụ mgbapụ izu ụka ngwa ngwa, Georgia nwere ihe ọ ga-enye onye ọ bụla. Nyocha mmachibido njem ọhụrụ tupu ịhazi njem gị. Lelee amụma ihu igwe tupu oge eruo iji zere nsogbu ọ bụla na -enweghị isi n'oge njem gị. Ọzọkwa, họrọ ebe ndị amachaghị nke ọma iji zere ndị njem nlegharị anya onwe ha, wee nwee ezumike ezumike na udo.